Corrugated Bhokisi Chinyorwa Pepa reunyanzvi ( 128giremu , 157giremu , 200giremu , 250giremu)
Kraft bepa (100giremu,120giremu,125giremu,150giremu,200giremu,250giremu )
Bhodhi renzou ( 250giremu , 300giremu )
Hunyanzvi pepa ( 128giremu , 157giremu , 200giremu , 250giremu)
Duplex bhodhi ine grey kumashure ( 250gsm,300gsm)
Kadhibhodhi (800giremu , 1000giremu , 1200giremu , 1500giremu )
Saizi Yakasarudzika Carton Bhokisi
Ruvara 1-4 C kana zvimwe & Pantone ruvara
Kudhinda Kudhinda neoffset
Silk chinovhara kudhinda
Surface Disposal Matte kana kubwinya
Kutsva goridhe kana sirivheri
Mabhuku eBraille kana debossed
Bata Cotton tambo,tambo yepepa,ribhoni tambo,zvichingodaro
Kushandisa Nguo,kunotenga,chipo. kurongedza,zvichingodaro
Dzokorora 1.bepa rinogadziriswazve
2.Unhu hwakanaka uye mutengo unonzwisisika
3.huwandu hwekugadzira huwandu uye nekukurumidza kutumira nguva
5.Zvakawanda: MOQ 1000 zvidimbu
Mubvunzo: Ndeipi yakajairwa nguva yekuendesa?
A: Kazhinji 25 Mazuva mushure mekusimbiswa kwehurongwa.
Mubvunzo:Ndeipi vimbiso yehunhu hwechigadzirwa?
A: Isu takaona uye vane hunyanzvi hwekushanda pamwe neQC timu. Ndapota usazvidya moyo nezvazvo.
Mubvunzo: Zviri sei mbishi zvinhu?
A: Isu tinosarudza yenyika yakasimbiswa Eco-hushamwari bepa, glue neingi yemaitiro ese ekugadzira.
A: Isu tinotsigira T / T., L / C., Paypal, WesternUnion uye Alibaba vimbiso yekutengeserana.
Mubvunzo:Ndingawana nguva yakadii kuwana iyi sampuli?
A:Mushure mekugamuchira muyero wekuchaja uye zvese zvinhu & dhizaini ichisimbiswa, nguva yekuenzanisira ndeye 5-7 Mazuva uye Express kuendesa kazhinji zvinoda kutenderedza 3-5 zuva.
Mubvunzo : Ndirini pandingawana iyo kotesheni yekubvunza kwangu?
A: Kazhinji kotesheni inozotumirwa kwauri mukati mezuva rimwe chete rekushanda pane zvese izvo zvigadzirwa zvave pachena. Kana chimwe chinhu nekukurumidza, tinogona kutaurira iwe mukati 2 maawa zvichibva pane zvese zvese zvaunopa.
Mubvunzo : Yakareba sei nguva yekugadzirwa kwemazhinji?
A : Kazhinji 20 mazuva. Kurumidza kurongeka kunowanikwa.
Mubvunzo : Ndingawana here sampuli pamberi pekugadzirwa kwakawanda?
A : Ehe saizvozvo! Izvo zvakajairika zvigadzirwa zvinofambira mberi ndezvekuti isu tichaita pre-kugadzirwa sampuro yako yemhando yekutarisa. Iyo yekugadzira yakawanda ichatangwa mushure mekunge tawana chako kusimbiswa pane ino sampuli.
Mubvunzo: Ikojaji yekuenzanisira inogona kudzoserwa?
A: Ehe, kazhinji muyero wekuteedzera unogona kudzoserwa kana iwe uchisimbisa kugadzirwa kwemazhinji, asi kune chaiwo mamiriro sangana nevanhu vanoteedzera neako odha.
Mubvunzo: rudzii rwepepa rinogona kudhindwa pairi?
A : Artpaper inopa yakanakisa kuita kweruvara uye dhizaini. Isu tinogona zvakare kupa mamwe akakosha mapepa senge nhema kadhi, kadhi jena, offset paper etc.
A: Kazhinji 1000 zvidimbu.